Madaxda madasha qaran iyo beesha caalamka oo isku heysta doorashada shan kursi oo hore loo laalay – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Madaxda madasha qaran iyo beesha caalamka oo isku heysta doorashada shan kursi oo hore loo laalay
Guddoomiyaha guddiga doorashada dadban ee heer federaal Abuukaate Cumar Maxamuud Cabdulle Cumar Dhageey ayaa kashifay muran ka dhex taagan madaxda madasha qaran iyo beesha caalamka.
Khilaafkaan ayuu ku sheegay inuu ku saabsan yahay qaabka dib loogu dooranayo shan kursi oo ka mid ah baarlamaanka federaalka Soomaaliya, kuwaas oo hore loo laalay kadib markii lagu eedeeyay inay si musuq iyo awood sheegasho ah kusoo baxeen.
Shanta xubnood oo ka mid ahaa 11-kii xildhibaan ee uu laalay guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ayaa madashu ay 7 ka mid ah cafisay oo la dhaariyay, iyadoo ku dartay xildhibaan kale.
Dhinaca kale, beesha caalamka ayaa dooneysa in kuraastaasi dib loogu doorto magaalada Muqdisho, iyaguna ay goob-joog ka noqdaan, halka madaxda maamul goboleedyada ay diideen oo ay si cad u sheegeen in degaanadii doorashadoodu ka dhacday dib loogu celinaayo.
Si kastaba ha ahaatee, arrintaan ayaa keentay inay hakato gebi ahaan dib u doorashada kuraastan ee muranka ka taagan yahay, waxaana warbixinta xaaladda kuraastaan oo ah mid siyaasadeed loo gudbiyay guddoonka baarlamaanka cusub ee Soomaaliya.
Hoos ka aqriso magacyada 5-ta kuraas ee la isku haysto
1- Cabdi Maxamuud Maxamed – Ugaar Saleebaan
2- C/qaadir Gaafow Maxamuud – Murusade
3- C/laahi Maxamed Aadan (Shaacir) – Galjecel
4- Sheekh Shaacir Maxamed -Macalin-Weyne
5- Maxamed C/laahi Nuux – Jiidle
Hodges offers leadership with proposed funding for Somali youth programs